Maitiro ekudzima Kubata ID uye Chiso ID muIOS 11 | IPhone nhau
iOS 11 inouya izere nezvinhu zvitsvaSezviri pachena iyo Cupertino kambani yakwanisa kunatsiridza sisitimu ine bhatiri rakanaka rezvisarudzo izvo vazhinji vashandisi veIOS vanga vachikumbira kwenguva yakareba, senge maitiro eiyo Control Center. Asi nhasi tichaona mashandisiro atingaite basa rinoitirwa nguva dzisinganakidze.
Iwe unoziva here kuti unogona kudzima Kubata ID uye Chiso ID kumhanya? Mune Actualidad iPhone isu tichaenda kukudzidzisa iwe nenzira yakapusa nzira. Nekuti zvinoenderana nemamiriro api ezvinhu, kuremadza Kubata ID uye Chiso ID chingakubudise mune anopfuura dambudziko rimwe.
Sezvo iwe uchinyatso kuziva, kune yekukurumidzira kufona system muIOS 11 iyo yakagamuchirwa kubva kune mamwe masisitimu pamwe neApple Watch. Kuti tiite izvi tinofanirwa kuramba tichimanikidza bhatani reMagetsi, iro riri padivi ratinoshandisa zvese kukiya chishandiso uye kudzima. Aya ndiwo maratidziro atichaita kuti tibatise ID muIOS 11 (Face ID mune ramangwana iPhone X). Asi DIsu tinofanirwa kuve nekufungisisa kwekutanga, uye izvo ndezvekuti isu tinofanirwa kumbobvisa runhare rwekukurumidzira inoitwa zvizere otomatiki nekudzokorora wadzvanya bhatani rerutivi.
Nezvo zvakati, tinotendeukira kuna Zvirongwa> SOS Dambudziko uye isu tichawana switch yekumisa otomatiki kufona. Kana tangoremedzwa tichaona kuti kana tichiedza kuvhura iyo yekubata ID isu tine basa rakaremara, saka isu tichafanirwa kupinda iyo yekuvhura kodhi. Izvo zviri nyore uye zvakapusa, saka tinokukurudzira iwe mune nyaya yekuve neFace ID kana Kubata IDKana iwe uchinzwa kutyisidzirwa nekukasira kana mune ramangwana, regedza aya mabasa kuti aite basa rembavha kana mumwe munhu ane hutsinye uyo anoda kutamba zvinokanganisa zvakanyanya kuoma kana zvichibvira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekudzima Kubata ID uye Chiso ID muIOS 11
Mangwani akanaka! Ndakagadzirisa iphone yangu ku ios11 uye ndaifanirwa kuisa kodhi kuti ndiivhure, asi kusiyana neyakavandudzwa yapfuura, panguva ino handizive kwekuwana kuti ndiitore. Unogona kundibatsira here? Kana kuti ndeyekuti haichakwanise kubviswa?
Apple inowedzera nguva yekurenda kwemamuvhi kwemaawa makumi maviri nemana